Boliiska Kenya oo fashiliyay weerar ay Al-Shabaab qorsheynayeen in ay ka geystaan Mandheera – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Boliiska Kenya oo fashiliyay weerar ay Al-Shabaab qorsheynayeen in ay ka geystaan Mandheera
By Abdihakim Sharif Ali / August 1, 2019 August 1, 2019
Mandhera-Kenya-(SONNA)- Hal Qof oo ka tirsan Dadka degaanka ayaa ku dhaawacmay dagaal kooban oo dhex maray Boliiska Kenya iyo Malleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab, kaas oo haatan lagu baxnaaninayo Isbitaalka Degmada Ceel-waaq Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Booliiska Kenya oo lagu Magacaabo, Charles Owino ayaa Maanta oo khamiis ah sheegay in ay Ciidanku dib u riixeen Koox Hubeysan oo kasoo tallowday Xadka Soomaaliya, kuwaas oo doonayay in ay qalalaase ka geystaan gudaha Kenya.
Wuxuuna Afhayeenku ku ammaanay Dadka reer Mandheera tallaabada geesinimada leh ee ay qaadeen, markii ay xog ku aaddan Aragagixisada la wadaageen Laamaha ammaanka.
Hadalka Afhayeenka ayaa yimid markii ay Koox Hubeysan isku dayday in ay weerar ku qaadaan Siddeed Shaqaale ah oo ka howl-galayay degaanka Kotulo, oo ka tirsan ismaamulka Mandheera.
Booliiska ayaa sheegay in Dableydu uu qorshahoodu ahaa in ay weerarka qaadaan 22-kii July ee Sanadkan, balse uu dib u dhacay, ka dib wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmartay Dadka degaanka iyo Saraakiisha ammaanka.
Wuxuu Afhayeenku ugu baaqay Shacabka in ay sii wadaan la shaqeynta Saraakiisha Booliiska, si loo adkeeyo ammaanka, wuxuuna sidoo ka codsaday Dadka reer Kenya in ay feejignaadaan oo ay soo sheegaan Cid kasta oo ay ka shakiyaan.